Tantara: Ny Mandan’i Jeriko - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Henoy izay nolazain’i Jehovah tamin’i Josoa: ‘Ianao sy ny lehilahy mpanaﬁka eo aminao dia handeha manodidina ny tanàna. Mandehana manodidina azy indray mandeha isan’andro mandritra ny enina andro. Ento miaraka aminareo ny ﬁaran’ny fanekena. Tokony handeha eo alohany ny mpisorona ﬁto ary hitsoka ny anjomarany.’
‘Amin’ny andro fahaﬁto dia tokony handeha manodidina ny tanàna impito ianareo. Avy eo dia mitsofa anjomara lavareny, ary asaivo manakora amin’ny antsoantson’ady mafy iray ny rehetra. Ka dia hirodana tanteraka ireo manda!’
Nanao araka izay nolazain’i Jehovah i Josoa sy ny olona. Raha teny am-pandehanana ny rehetra dia nangina. Tsy nisy niteny na dia indray mandeha monja aza. Ny mba zavatra re dia ny feon’ny anjomara sy ny tongotra mamindra. Angamba natahotra ireo fahavalon’ny vahoakan’Andriamanitra tao Jeriko. Tazanao ve ilay tady mena mihantona avy eo amin’ny varavarankely? Varavarankelin’iza moa io? Eny, nanao izay nasain’ireo mpisafo tany roa natao i Rahaba. Ao an-trano ny ﬁanakaviany rehetra niandry niaraka taminy.
Farany, tamin’ny andro fahaﬁto, taorian’ny fandehanana manodidina ny tanàna impito, dia naneno ny anjomara, niantsoantso ny lehilahy mpanaﬁka, ary nianjera ireo manda. Avy eo dia hoy i Josoa: ‘Vonoy ny olona rehetra ary doroy ny tanàna. Doroy ny zava-drehetra. Ny volafotsy, ny volamena, ny varahina ary ny vy ihany no alao ary atolory ho an’ny rakitry ny tranolain’i Jehovah.’
Hoy i Josoa tamin’ireo mpisafo tany roa: ‘Mandehana mankao an-tranon-dRahaba, ary ento mivoaka izy sy ny ﬁanakaviany rehetra.’ Novonjena i Rahaba sy ny ﬁanakaviany, araka ny nampanantenain’ireo mpisafo tany azy.
Inona no nasain’i Jehovah nataon’ireo mpanaﬁka sy ny mpisorona nandritra ny enina andro?
Inona no tokony hataon’ireo lehilahy ireo tamin’ny andro fahaﬁto?
Nahoana no mitovy amin’ny ﬁtoriana ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’izao andro farany izao, ny fandehanan’ireo Israelita nanodidina an’i Jeriko tamin’ny andro fahaﬁto? (Josoa 6:15, 16; Isaia 60:22; Matio 24:14; 1 Kor. 9:16)